जापानमा अब साँच्चिकैको भूतप्रेत हेर्न पाइने - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ३० असार २०७२, बुधबार ००:५५ |
टोक्यो । तपाई भूतप्रेतमा विश्वास गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ? अर्थात के तपाई वास्तविक भूतप्रेतसँग भेट्न चाहनुहुन्छ ? यदि चाहनुहुन्छ भने जापान अवश्य आउँनुहोला । किनभने वास्तविक भूतप्रेतसँग भेट्ने तपाईको इच्छा जापानमा पूरा हुनेछ ।
अधिकांश जापानीहरु भूतप्रेतमा विश्वास गर्छन् । उनीहरुका अनुसार जापानमा त्यस्ता धेरै ठाउँहरु छन्,जहाँ भूतप्रेत अथवा केही अदृश्य शक्तिहरुको बसोबास रहेका छन् । जापानी भाषामा सिनेरेइ भनिने त्यस्ता ठाउँहरुमा पुग्ने जोकोहीले भूतप्रेतसँग जम्काभेटको अनुभव गर्न पाउँने धेरैको अनुभव छ । ती सिनेरेइहरुमा गएर भूतप्रेतको अनुभव गर्न चाहनेहरुका लागि जापानमा हालै एउटा विशेष टुरको नै व्यवस्था गरिएको छ । जापानको योकोहामामा रहेका त्यस्ता भूताहा स्थानहरुमा जान चाहनेहरुलाई बहादुर ट्याक्सी ड्राइभरहरुको व्यवस्था गरिनेछ । उनीहरुले तपाईलाई ती स्थानमा लैजाने आँट गर्नेछन् । यो टुरको नाम भूताहा स्थान धार्मिक टुर राखिएको छ ।
जुलाइ २४ देखि सेप्टेम्वर ४ सम्म जारी रहने यो टुरमा सीमित व्यक्तिहरुलाई मात्र भूतसँग भेट्ने अवसर दिइनेछ । ६ हजार येन तिरिसकेपछि सानवा कोत्सु कम्पनीका ट्याक्सी ड्राइभरले शिन्योकोहामा स्टेशनबाट राति ९ बजे तपाईलाई भूताहा स्थानमा लैजानेछ ।
यात्राको अवधी ९० मिनेटको हुनेछ । तपाईलाई भूत देखाउँन टनेल,रेलको पूलमूनि,खाली होटल लगायतका स्थानमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ ।
Previousनेपालले बुधवार हङकङसँग भिड्ने
Nextतपाईको आज : २०७२ साल असार ३० गते बुधवार
कसैको पनि तलब गोप्य नरहने देश !
१० श्रावण २०७४, मंगलवार ०२:११
विद्यार्थीसंग परामर्श लिएर प्रश्नपत्र बनाउने विश्वविद्यालय !
१५ पुष २०७४, शनिबार ०४:४१